Global Voices teny Malagasy » Pakistan: Aasia sy Aafia – Ny tantarana vehivavy Pakistane roa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Desambra 2010 8:32 GMT 1	 · Mpanoratra Sana Jamal Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Media sy Fanoratan-gazety, Zon'olombelona
Anaty fotoana iray izay mbola maha-lany fanahy sy mahatohina izao tontolo izao noho ny fanamelohana ho faty an'i Aasia Bibi  amin'ny resaka fitenenan-dratsy ny finoana, dia sahiran-tsaina ny amin'io tranga miteraka fanoherana io koa ny Pakistane. Ny firenena iray manontolo no mahatsiahy an'i Dr Aafia  amin'io ary samy mampitaha ireto tranga roa ireto na ny vahoaka na ny mpampahalala vaovao. Noho izy roa samy manohitra ny foto-kevitra fototry ny fitoviana sy ny rariny
Araka ny tatitra dia  maro ny Pakistane no mahatsiaro ho voakasika ihany koa amin'ny tranga mahazo an'i Aasia Bibi (vehivavy pakistane kristiana iray voaheloka ho faty fa hoe naniratsira finoana) sahala amin'ny fanahian'izy ireo momba ny fitazonana an'i Aafia Siddiqui (voaheloka hifonja 86 taona any Etazonia). Saingy mampalahelo ny fahitàna fa haingam-pandeha foana manerana izao tontolo izao ny hafatra feno fankahalàna miohatra amin'ny hafatra mitory fandriampahalemana.
Toy ny anoratana'i  Harris Khalique azy ao anaty tsanganany
“Amin'izao fotoana izao, ireo silamo pakistane izay miaina ao anatina firenena tsy dia azo antoka loatra sy fiarahamonina misamantsamaka, dia mikivilavila eo anelanelana tendro roa – Aafia Siddiqui sy Aasia Bibi. Tena sarotra be ny hamoaka tsoakevitra tsy mitanila eny imasom-bahoaka momba ny trangan'i Aafia Siddiqui. Mba firy amin'ireo mpanao politika sy ireo mpitarika ara-kevitra no ho sahy hihataka kely haneho hevitra, raha toa kosa ny olona rehetra ka mitaky amin'ny manampahefana amerikana hamotsotra azy ”
Tsy ela akory izay dia nanoratra tao amin'ny Pakistan Observer  aho mikasika io olana io:
Aasia Bibi, 45, renim-pianakaviana pakistane kristiana iray niteraka dimy, nosamborina fa hoe naniratsira finoana. Any am-ponja izy efa ho herintaona sy tapany ary tamin'ny 8 Novambra 2010, nohelohin'ny fitsarana tao an-toerana hahantona mifanaraka amin'ny lalàna fa hoe naniratsira ny Mpaminany Mohammad.
Tao anaty tatitra iray nomena ny Filoha Asif Ali Zardari tamin'ny Alakamisy, ny Ministra Federaly miadidy ny Vitsy an'isa, i Shahbaz Bhatti, dia nangataka ny hamelàna heloka na hamoahana an'i Aasia Bibi avy any am-ponja raha toa ka tsy raisina an-tànana haingana ny fampakàrana nataony momba ny didy hanantonana azy. Nanolo-kevitra ihany koa ilay Ministra ny amin'ny tokony hitondràna fanavaozana amin'io lalàna momba ny resaka faniratsirana miteraka adihevitra eto amin'ny firenena io.
Ilay tatitra dia taorian'ny antso famelan-keloka nataon'ny Papa Benoît XVI, sy vondron'olona mpiaro ny zon'olombelona, gazety samihafa ary ny governoran'ny tanàna nipoiran'ny fanamelohana an'i Bibi, izy no ho vehivavy voalohany hovonoina amin'ny alalan'ny fanantonana fa hoe naniratsira finoana.
Amin'ny fampitahàna tsy mitanila ny tranga mahazo an'ì Aasia Bibi sy Dr Aafia Siddiqui, dia afaka hahita ny olona fa tena tsy misy itovizana izy ireo, saingy ny vahoaka Pakistane sy ireo mafana fo mpiaro ny zon'olombelona mihevitra fa tsy azo sarahana ireo tranga roa ireo noho izy roa mikitika ny tsy fitoviana, ny tsy rariny ary ny mizàna tsindrian'ila eny amin'ny fiarahamonina.
Ahmed Quraishi, mpanoratra momba ny politika ho an'ny vahoaka dia nanamarika hoe ,
“Anabavintsika i Aasia Bibi ary mila ny fanohanantsika hanohitra ny sarintsarin-pitsaràna azy. Saingy ny tompon'ny teny farany amin'ny tranga mahazo azy dia ireo manampahaizana silamo izay mahalàla tsara hoe hatraiza marina ny fandeferana sy ny fahalalahan-tsaina ananan'ny Silamo.”
Notondroiny ihany koa ny fahanginan'ny fanjakana sy ny manampahefana maro ao amin'ny governemanta izay maniry ankehitriny ny hanafoanana io lalàna momba ny faniratsirana io nefa tsy niloa-bava mihitsy na kely aza manohitra ny tsy rariny natao tamin'i Dr Aafia Siddiqui.
Araka ny Matoandahatsoratry ny Express Tribune ,
“Iharan'ny tsindry hatrany ireo vitsy an'isa amin'io lalàna tsy manjary io ary tsy misy mihitsy olona manao fanentanana toy izao ataontsika izao ho fanafahana an'i Aafia Siddiqi hivoaka ny fonja amerikana”
Farrukh Khan Pitafi manoratra ao amin'ny Daily Times 
“Aleo ampahatsiahiviko anareo fa izaho dia iray amin'ireo mpanoratra liberaly vitsy nilaza an'i Dr Aafia Siddiqui ho zanakavavin'ity firenena ity. Ahoana no hieritreretana zavatra hafa ankoatra izany momba an'i Aasia Bibi ?”
Mitombo ny tsindry mahazo ny Filoha Asif Ali Zardari mba handraisany anjara amin'ny fijerena ny hoavin'ilay vehivavy kristiana voaheloka ho faty tsy ela akory izay noho ny resaka fitenenan-dratsy finoana, nahatonga ny fiombonambe iraisam-pirenena hifantoka amin'io ka niteraka firotsahana an-dalàmbe tao an-toerana.
Vantany vao novolavolaina ny lalàna Pakistane momba ny fitenenan-dratsy ny finoana dia efa nohelohin'izao tontolo izao. Tamin'ny herinandro lasa ny Papa Benoît XVI dia nitaky ny famotsorana an'i Bibi  ary nanambara fa ny kristiana ao Pakistan dia “matetika loatra no iharan'ny herisetra sy ny fanavakavahana”
Maro ireo tsikera nataon'ny Pakistane manakiana ny lalàna mifehy ny fitenenan-dratsy ny finoana sady manohana an'i Aasia sy Aafia no manaporofo ny fahaiza-mandiniky ny Pakistane.
Manameloka ny lalàna henjan'ny fitenenan-dratsy ny finoana, hoy i Farrukh manoratra,
“Voalohany, na inona lalàna maneho ny fitanilàn'ny fanjakana ho amina finoana iray dia mifanohitra amin'ny fitondrana vokatra tsara ho an'ny demaokrasia sy ny zon'olombelona. Faharoa, miangavy an'ireo izay manohana ny filazana an'io ho lalàna silamo aho mba hanaporofo aminay ny foto-pisiany avy ao anaty Korany Masina. Raha tsy afa-manaporofo izany ry zareo dia mila mahatsapa fa mifanohitra amin'ny fanahy sy ny tanjon'ny Silamo koa. Farany, raha mbola misy foana lalàna mikasika ny fitenenan-dratsy ny finoana, dia mbola hitohy hampizara ny fiarahamonina izany, ary amin'izany dia hitondra sehatra vaovao amin'ny fampiharana tafahoatra ilay lalàna”
Ny ilaintsika izao dia ny hahatsapantsika fa ny “maha-olona no ambonin'ny lalàna” ary izay firenena tsy manàja ny maha-olona dia tsy maintsy hiatrika fiantraikany henjana.
Araka izay anipihan'ilay Pakistane mpanao gazety azy, Mahtab bashir, ao anaty lahatsorany mitondra ny lohateny hoe ‘Aasia Bibi, Blasphemy and Chief Justice’  Aasi Bibi, ny fitenenan-dratsy ny finoana ary ny Filohan'ny Fitsarana’ 
“Ny fomba fisainana ara-tsosialy, ny lalàna efa mamaritra mialoha sy ny fomba fijerin'ny tontolo tsy misy fandeferana izay mamàka eo anivon'ny fiarahamonintsika, dia ilaina atsipy any an-dabam-pakon'ny tantara. Tokony hofoanana ny lalàna momba ny fitenenan-dratsy ny finoana. Tokony hahatsapa ny Pakistane fa mampihemotra antsika ho any amin'ny Taonjaton'ny Haizina (Dark Ages) ny hafanam-po tafahoatra manome làlana ny fifamonoana sy ny fifankahalàna manoloana ny finoan'ny hafa raha toa isika tsy hanatsimbadika io fomba mampivarahontsana io.”
Maro ny Pakistane no mihevitra fa tsy manàja araka ny tokony ho izy ny soatoavina sy ny fampianarana Silamo ny lalàna mifehy ny fitenenan-dratsy ny finoana, satria ny Mpaminany Muhammad (ho tahiana anie ny fahatsiarovana azy) no voalohany tamin'ny fiarovana ny fifandeferana, ny rariny ary ny fitoviana.
Toy izay ampahatsiahivan'i Ayesha Siddiqa azy ho antsika ao amin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe “Sacrifice at the altar of pragmatism”  (Sorona eo ambony alitaran'ny pragmatisma – foto-pisainana mitory ny hoe ny hevitra entina momba ny zavatra iray dia miankina betsaka amin'ny fampiharana azy eo amin'ny fiainana)
“Ny zava-misy aloha dia ny fisovohan'io tsy fifandeferana io any anatin'ny fiarahamonintsika sy ny sampan-draharaham-panjakana isankarazany any. Ny fiafaràny dia tsy hoe ny finoana loatra no resahana fa ny fampiasàna ny finoana mba hahazoana fahefana misimisy kokoa hahafahana mamoritra ireo tsy ampy hery. Efa ela no nanadinoantsika ny fomban'ny Mpaminanin'ny finoana Silamo (ho tahiana anie ny fahatsiarovana azy) izay naneho fandeferana sy fitserana ho an'ilay vehivavy tsy silamo fantatra fa nitoraka fako azy. Ny tantara dia nilaza fa nandeha nanontany ny fahasalamany izy rehefa tsy hita nanao ny fanaony andavanandro nahazatra azy ramatoa io. Indrisy, tsy mba afaka mampihatra ny fandeferana toy izany isika satria ireo manampahaizantsika, ny mpitarika, ny mpandinika ary ireo mpitsara dia jamban'ny politikan'ny pragmatisma sy ny fitiavam-pahefana.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/12/15/11334/
 Araka ny tatitra dia : http://www.pakobserver.net/201011/27/detailnews.asp?id=63876
 nanamarika hoe: http://aq-lounge.blogspot.com/2010/11/asia-bibi-is-our-sister.html
 Matoandahatsoratry ny Express Tribune: http://tribune.com.pk/story/80301/the-shame-of-aAasia-bibis-blasphemy-charade/
 manoratra ao amin'ny Daily Times: http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=20101126story_26-11-2010_pg3_6
 a nitaky ny famotsorana an'i Bibi: http://www.asianews.it/news-en/Pope-appeals-for-full-freedom-for-Asia-Bibi-20016.html
 ‘Aasia Bibi, Blasphemy and Chief Justice’: http://mahtabbashir.blogspot.com/2010/11/woes-of-our-minorities.html
 “Sacrifice at the altar of pragmatism”: http://www.pkcolumnist.com/ayesha-siddiqa/sacrifice-at-the-altar-of-pragmatism-2